Maitiro ekutarisa akachengetwa mapassword muSafari | IPhone nhau
Maitiro ekuona akachengetwa mapassword muSafari
Mazuva ese, kunyanya kana tikapedza chikamu chikuru chezuva tiri kure nemusha, zvinokwanisika kuti tiwane masevhisi mazhinji akadai semagetsi nemabhiri emvura, tarisa email kuburikidza newebhu, uwane masevhisi epamhepo ... ngatizviite kuburikidza ne nhare. Kugadzirisa ese aya mapassword isu tinogona kushandisa 1Password, chishandiso icho pamusoro pekugadzirisa ese edu mapassword, inotipawo isu kuti tigadzire iwo kuitira kuti zvisagone kuwana masevhisi edu. Asi isu zvakare tine sarudzo ye chengeta ivo zvakananga muSafari, kuti iwe ugone kukurumidza kuzadza zita redu rekushandisa uye password.
Asi pane kanopfuura kamwe chete uye mbiri, zvinogona kudaro kanganisa kana uchizvizivisa uye isu tinofanirwa kuchinjisa kana kuidzima kuti tikwanise kunyatso kuwana iwo masevhisi. Neraki isu tinogona zvakare kuzviita zvakananga kubva kune yedu iPhone tisingashandisi kuICloud kana Mac yedu, kubva kwatingaitewo nekukurumidza.
Kana isu tichida kuwana mapassword isu atakachengeta muS Safari uye gadzirisa kana kudzima chero data yatakasanganisira, isu tinofanirwa kuenderera nenzira inotevera.
Tarisa mapassword akachengetwa muSafari
Mukati meMagadzirirwo kusvikira yechishanu block yezvisarudzo uye tinya pane sarudzo safari.
Mukati meSafari tinotsvaga sarudzo Passwords inowanikwa mukati meGeneral sarudzo block
Kudzvanya yedu iPhone zvinotikumbira kuti tiise zvigunwe zvedu muTouch ID kana isu tinonyora yedu iCloud password. Neiyi nzira, isu tinodzivirira chero munhu watinosiya iPhone yedu kuti irege kuwana ruzivo rwakakosha.
Tevere, ese mapassword akachengetwa mu iPhone yedu anozoratidzwa pamwe newebhu kwaanoenderana. Kana tichida chinja zvimweIsu tinongofanirwa kubaya pane bhatani reHedha, iri mukona yepamusoro yekurudyi. Iwindo idzva rinozovhura kwatinogona kushandura zita rekushandisa nephasiwedi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuona akachengetwa mapassword muSafari
Meteor inotitaridza ruzivo rwemamiriro ekunze mune icon uye mubato renzvimbo
Zvichiri zvekare, asi iyi ndiyo iPhone 7 chassis?